Burma Partnership » Political Parties
Posts Tagged ‘Political Parties’ (28 found)
Weekly Political Events Regarding the SPDC’s Election (025-2010)
* ခမောက်ပုံ ပါတီတံဆိပ် အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကန့်ကွက်သည့်ကြားမှ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က အမျိူးသားဒီမိုကရေစီအင်အာစု NDF ပါတီကို ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကောက်မရှင်က နိုင်ငံရေးမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုလိုက် သည့်အပေါ် အမျိူးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ် NLD က လက်မခံကြောင်း ရှုတ်ချလိုက်သည်။
* ဒေါက်တာတူးဂျာသည် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့နှင့် ဆက်စပ်လျှက်ရှိသဖြင့် ဒေါက်တာတူးဂျာဦးဆောင်သော ကချင်ပြည်နယ်တိုးတက်ရေးပါတီ KSPP ကိုပါတီတည်ထောင်ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ကြောင်းအမှတ် ၁ စက်မှုဝန်ကြီး ဦးအောင်သောင်းက ကချင်ခေါင်းဆောင်များကို ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့က ပြောကြားလိုက်သည်။
July 19, 2010 • By Network for Democracy and Development • Tags: 2010 Elections, Burmese, Ethnic Nationalities, Network for Democracy and Development, Political Parties, Political Prisoners, Weekly Political Events • Read more ➤
Weekly Political Events Regarding the SPDC’s Election (024-2010)
In this week’s report you will find:
* According toavillage peace and development council official, even though authorities have been providing national IDs for residents in Gwa Township, Arakan State, there are many local people who cannot afford the cost and the time to wait. Gwa Immigration Department, in two groups, has been providing national IDs for any resident who are over 18 years of age with 1000 kyat service fee for each person.
•	ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဂွမြို့နယ်၌ ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲပေးနိုင်ရန်အတွက် အာဏာပိုင်များက နိုင်ငံသားစိစ်ရေးကဒ်ပြား ပြုလုပ်ပေးနေသော်လည်း စရိတ်မတတ်နိုင်သူ ဒေသခံအများအပြား ရှိနေကြောင်း ကျေးရွာ ရယက လူကြီးတစ်ဦးကပြောသည်။
July 11, 2010 • By Network for Democracy and Development • Tags: 2010 Elections, Burmese, Ethnic Nationalities, Network for Democracy and Development, Political Parties, Political Prisoners, Weekly Political Events • Read more ➤
NDD Monthly Chronology Events June – 2010
An extensive monthly chronology of events researched and distributed by the Network for Democracy and Development (NDD),aBurmese political organization based on the Thai-Burma border[…]
July 6, 2010 • By Network for Democracy and Development • Tags: Burmese, Election Laws, Ethnic Nationalities, Monthly Chronology Events, Network for Democracy and Development, Political Parties • Read more ➤
Weekly Political Events Regarding the SPDC’s Election (023-2010)
* အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစု NDF မှရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရာတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် တင်ပြထားသော ပါတီတံဆိပ်သည် ခမောက်ပုံပါနေသဖြင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ် NLD ကတရားဝင်ကန့်ကွက် သွားမည်းဖြစ်ကြောင်း အဖွဲ့ချူပ် ဒု- ဥက္ကဌ ဦးတင်ဦးက ပြောသည်။
* နအဖစစ်အစိုးရ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ခံ စာပေစိစစ်ရေးနှင့် မှတ်ပုံတင်ဌာနက ပြည်တွင်းထုတ်ဂျာနယ်များတွင် နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ လှုပ်ရှားမှုသတင်း၊ အင်တာဗျူးများကို စိစစ်ဖြတ်တောက်မှုများ ပိုမိုဆိုးရွာလာနေသည့်အပေါ် မတူကွဲပြားခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီက အာဏာပိုင်များမှ လျှော့ပေါ့ပေးရန်တောင်းဆိုလိုက်သည်[…]
July 4, 2010 • By Network for Democracy and Development • Tags: 2010 Elections, Burmese, Election Laws, Ethnic Nationalities, Network for Democracy and Development, Political Parties, Weekly Political Events • Read more ➤
Weekly Political Events Regarding the SPDC’s Election (022-2010)
In this week’s political events, you will find:
* A resident from Putao stated that USDP has been providing 5,000 kyat each to every local resident who would vote for USDP in the elections in Putao District, which is the northernmost district of Burma. The USDP launched that particular campaign in some villages in Machyangbaw Township from 10 to 25 May.
ယခုအပတ် NDD ၏သတင်းမှတ်တမ်းတွင်-
* မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းအစွန်ရှိ ပူတာအိုခရိုင်တွင် ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ(USDP) မှရွေးကောက်ပွဲတွင် ၄င်းတို့ပါတီအား မဲထည့်ရန်အတွက် ဒေသခံပြည်သူများကို တစ်ဦးလျှင် ကျပ်ငွေ ၅၀၀၀ ပေး၍ စည်းရုံးနေသည်ဟု ဒေသခံတစ်ဦးကပြောသည်[…]
June 28, 2010 • By Network for Democracy and Development • Tags: 2010 Elections, Burmese, Election Laws, Ethnic Nationalities, Network for Democracy and Development, Political Parties, Weekly Political Events • Read more ➤
Weekly Political Events Regarding the SPDC’s Election (021-2010)
In this week’s political events, you will find
According toaresident, U Aung Than Htay, the Village Peace and Development Council (VPDC), and U Kyaw Myint, the Clerk of VPDC, in Kyigyi Village Tract, Ingapu Township, Irrawaddy Division, threatened residents that they would be arrested and questioned if they did not support and vote for Union Solidarity and Development Party in the elections
စစ်အစိုးရမှ ပြုလုပ်မည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ USDP ကိုမထောက်ခံပါက ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဧရာဝတီတိုင်း၊ အင်္ဂပူမြို့နယ် ကျီးကြီးအုပ်စု ဥက္ကဌ ဦးအောင်သန်းဌေး နှင့် ရယက စာရေး ဦးကျော်မြင့်တို့က ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုခဲ့သည်ဟု ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောသည်။
June 20, 2010 • By Network for Democracy and Development • Tags: 2010 Elections, Burmese, Election Laws, Ethnic Nationalities, Network for Democracy and Development, Political Parties, Weekly Political Events • Read more ➤
Recent reports of Burma’s nuclear program continue to reverberate throughout Burma’s political spheres and the international community. Opposition parties recently came out in strong opposition to the junta’s wasteful spending on its attempts at producing nuclear weapon technology rather than allocating it towards its woefully skeletal health and education budgets.[…]
June 13, 2010 • By Burma Partnership • Tags: 2010 Elections, Ethnic Nationalities, Nuclear Program, Political Parties, Union Solidarity and Development Party • Read more ➤
Fifteen parties have confirmed that they will register for this year’s election.
The parties will join two other political organizations—the Union of Myanmar Federation of National Politics (formerly known as the Union of Myanmar National Political Force) and the 88 Generation Student Youths (Union of Myanmar)—that registered on Monday to contest the election. […]
March 24, 2010 • Tags: 2010 Elections, Political Parties • Read more ➤